ဒီေန့မွာက်ေရာက္မယ့္ မင္းေသြး ရဲ့ေမြးေန့အတြက္ Happy Birthday ေျပာခ်င္ေပမယ့္ ဘယ္ေ တာ့ မွ ၾကားနိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူးဆိုတဲ့ သားညီ – XB Media Myanmar
ဒီေန့မွာက်ေရာက္မယ့္ မင္းေသြး ရဲ့ေမြးေန့အတြက္ Happy Birthday ေျပာခ်င္ေပမယ့္ ဘယ္ေ တာ့ မွ ၾကားနိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူးဆိုတဲ့ သားညီ
ပရိသတ္ေတြခ်စ္ၾကတဲ့ မင္းသား၊ အဆိုေတာ္ မင္းေသြးကေတာ့ သူခ်စ္တဲ့ မိတ္ေဆြေတြေရာ၊ ပရိသတ္ေတြေရာကို နႈတ္မဆက္ပဲ ထြက္ခြာသြားတာ အခုဆိုရင္ (၁)နွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ေတာင္ရိွျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ေတြၾကာျမင့္ျပီဆုိေပမယ့္ က်န္ရစ္ခဲ့သူေတြအတြက္ကေတာ့ တစ္ရက္မွေမ့ လို့ မရ နိုင္ပါဘူး။ ဒီကေန့ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ေန့က မင္းေသြးရဲ့ေမြးေန့ေလးပဲျဖစ္ျပီး မင္းေသြးသာ ရိွေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ အသက္ (၃၅)နွစ္ ျပည့္ေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
မင္းေသြးရဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ သရုပ္ေဆာင္၊ ဒါရိုက္တာသားညီကလည္း သြားေလသူမင္းေသြးရဲ့ ေမြးေန့မွာ သတိတရရိွေနတာျဖစ္ျပီး အခုလိုပဲ ရင္ဖြင့္ေျပာဆုိထား ပါတယ္။ သားညီက “Happy Birthday ေျပာခ်င္ေပမယ့္ အခုေတာ့ ခင္ဗ်ား မၾကားႏိုင္ေတာ့ ဘူး ဦးေလးေရ !!!” ဆိုျပီး မင္းေသြးအတြက္ ယူၾကံဳးမရျဖစ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
မင္းေသြးက သားညီရိုက္ကူးတဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြမွာ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ျပီး အျပင္ မွာ လည္း တစ္ေယာက္နဲ့တစ္ေယာက္ ညီအစ္ကိုအရင္းေတြလို ရင္းနွီးသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ၾကီးလည္း ေမြးေန့မွာ ရိွမေနေတာ့တဲ့ မင္းေသြးကို သတိတရရိွေနမယ္ ထင္ပါတယ္ေ နာ္။
Source: Thar Nyi’s fb
ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ မင်းသား၊ အဆိုတော် မင်းသွေးကတော့ သူချစ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေရော၊ ပရိသတ်တွေရောကို နှုတ်မဆက်ပဲ ထွက်ခွာသွားတာ အခုဆိုရင် (၁)နှစ်ကျော် အချိန်တော င် ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တွေကြာမြင့်ပြီဆိုပေမယ့် ကျန်ရစ်ခဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ တစ်ရက် မှမေ့ လို့ မရ နိုင်ပါဘူး။ ဒီကနေ့ ဇွန်လ (၂၁) ရက်နေ့က မင်းသွေးရဲ့မွေးနေ့လေးပဲ ဖြစ်ပြီး မင်းသွေးသာ ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် အသက် (၃၅)နှစ် ပြည့်တော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသွေးရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာသားညီကလည်း သွားလေသူမင်းသွေးရဲ့ မွေးနေ့မှာ သတိတရရှိနေတာဖြစ်ပြီး အခုလိုပဲ ရင်ဖွင့်ပြောဆိုထား ပါတယ်။ သားညီက “Happy Birthday ပြောချင်ပေမယ့် အခုတော့ ခင်ဗျား မကြားနိုင်တော့ ဘူး ဦးလေးရေ !!!” ဆိုပြီး မင်းသွေးအတွက် ယူကြုံးမရဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသွေးက သားညီရိုက်ကူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး အပြင် မှာ လည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညီအစ်ကိုအရင်းတွေလို ရင်းနှီးသူတွေဖြစ် ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း မွေးနေ့မှာ ရှိမနေတော့တဲ့ မင်းသွေးကို သတိတရရှိနေမယ် ထင်ပါတယ်ေ နာ်။
Happy Father’s Dayမှာ ၈တန်းနှစ်ကတည်းက ဆုံးသွားပြီး ဘုရားတောင်အတူမသွားဖူးခဲ့ရတဲ့ အဖေရဲ့ ပုံရိပ်လေးကို ချပြလာတဲ့ ပိုပို
ပရိသတ်တွေအားပေးမုှကို များစွာရ ရှိနေတဲ့ အေးမြဖြူရဲ့“လွမ်းနေလို့” သီ ချင်းဗီဒီယိုလေး
ကိုဗစ်ကာလ စီးပွာရေး မကောင်း တဲ့ အ ချိန် ကြက်ဥဝယ်ဖို့တောင်အနိုင် နို င်ဖြစ်နေတဲ့သူ့အတွက်စိန်တွေကိုLive မှာ သိန်းရာကျော်တန်တွေကိုပဲ ကြီး လှော် ဝယ်သလို ဝယ်နေသူတွေကို အံ့ သြနေတဲ့သားညီ October 20, 2020
ဖစ်ဖစ် ၊ ချစ်ချစ်တို့နဲ့အတူ ချစ်စဖွယ် tik tok လေးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဝမ်း October 20, 2020
မိနစ် (၁၂၀) အတွင်းမှာ သိန်း (၈၀၀) ကျော်ဖိုးထိ ရတနာပစ္စည်းတွေရောင်း ချပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ October 20, 2020
The Florist by Yun က လီလီ ပန်းစည်းတွေကို နေတိုးက ဝယ်ယူ အားပေးခဲ့ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ လွင်မိုး October 20, 2020
သူ့ရဲ့ ပုံတူကိုသေရာပါဆေးမင်ကြောင် ထိုးပေးတဲ့ တတိယမြောက်မြန်မာနိုင် ငံ သားကြောင့် မျက်ရည်တောင်ဝဲမိ တယ် ဆိုတဲ့ Sinon Loresca October 20, 2020
မကွယ်လွန်ခင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူအတွက် အ မှတ် တရနောက်ဆုံးစာလေးတစ် စောင်ရေးသားထားခဲ့တဲ့ အဆိုတော် မီးမီးခဲ October 20, 2020
ကိုယ့်ပါတီ အာဏာရဖို့ ပြည့်သူ့ကျန်း မာရေးကို ပြန်မကြည့်ပေးတဲ့ ဘယ်ပါ တီ မဆို မထောက်ခံဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ နန္ဒာလှိုင်ခင်ပွန်းဦးဇေသီဟ October 20, 2020
Facebook သုံးစွဲသူတွေကြားမှာ နာ မည်ကြီးနေတဲ့ Lisaရဲ့ အကနဲ့ ထပ်တူ ကျအောင် ကပြလိုက်တဲ့ အုပ်စိုးခန့်ရဲ့ Tiktok ဗီဒီယို October 20, 2020
ဖခင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ သမီးကို ဆုံး ရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက် ရင်တွင်းခံစား ချက် တွေကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ အဆို တော် ချစ်ကောင်း October 20, 2020
အလုပ်များများပိတ်ပါစေဆိုပြီး ဆု တော င်းခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်မှာ ပိုက် ဆံနဲ့စားစရာတောင်မရှိတော့လို့ငိုနေ တဲ့ ဟဲဗီးဖြိုးရဲ့ Tik Tok အခွီဗီ ဒီ ယို October 20, 2020